राप्रपा (संयुक्त) भन्छ, सरकार ५ हजार वर्ष पुरानो नेपाली सभ्यता मास्न तल्लीन छ  Hamrosandesh.com
राप्रपा (संयुक्त) भन्छ, सरकार ५ हजार वर्ष पुरानो नेपाली सभ्यता मास्न तल्लीन छ
भरतपुर, २७ फागुन ।
राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको बताएका छन् ।
दलगत प्रभावमा परेको कारण बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आघात पुगेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै राणाले भने, ‘राष्ट्र प्रमुखले कुनै पक्ष लिन पाइन्न । दशैंमा टिका लगाउँदा नागरिकलाई घुँडा टेकाउन पाइन्न । दल विशेष प्राथमिकता दिन पाइन्न । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राष्टपति निष्पक्ष नरहेको कारण राष्ट्र प्रमुखका लागि, त्यही पुरानो संस्था, राजसंस्थामा फर्काउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
राप्रपा (संयुक्त) ले सनातन हिन्दु राष्ट्रको सडक तताउने अध्यक्ष राणाले घोषणा गरे । हिन्दु राष्ट्रको आन्दोलनका लागि वडा तहसम्म संगठन दुरुस्त राखेर तयार रहन कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिए ।
चितवन जिल्ला कार्य समितिद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै राणाले संविधान प्रति केही असहमतिहरु रहेको स्पष्ट पारे । ती असहमतिहरु कायम राख्दै संविधान कार्यान्वयमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
राप्रपा (संयुक्त) मूलधार राप्रपा भएको र यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरु समाहित हुने अध्यक्ष राणाले उद्घोष गरे ।
राणाले भने, ‘एकता प्रक्रियाले अझ बृहत आकार ग्रहण गर्नेछ । चरणवद्ध रुपमा अझ बढी राष्ट्रवादीहरु राप्रपा (संयुक्त) मा समावेश हुनेछन् । राप्रपाको मूलधार राप्रपा (संयुक्त) नै हो, यो एकजुट भएको पार्टी अब कहिले फुट्ने छैन ।’
राप्रपा (संयुक्त) का अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले वर्तमान सरकार पाँच हजार वर्ष पुरानो नेपाली सभ्यता मास्न तल्लीन रहेको आरोप लगाए ।
‘नेकपा सरकार, प्रधानमन्त्रीलाई होली वाइन खान फुर्सद छ तर अश्वमेघ यज्ञमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कसैलाई फुर्सद भएन । गरिवी र अशिक्षाको आडमा धर्म निरेपक्षको शासनकालमा धर्म परिवर्तन गरेर नेपाली सभ्यता, हिन्दु, बौद्ध सभ्यता मास्ने क्रम जारी छ । यसमा वर्तमान सरकारले नेतृत्व गरेको छ,’ डा. लोहनीले भने ।
हिन्दु राष्ट्रको पहिचान पूर्नस्थापनाको आवश्यक्तामा सबै धर्मको सम्मान कायम रहने, कुनै धर्मको अवमूल्यन नहुने लोहनीले स्पष्ट पारे ।
लोहनीले संवैधानिक राजसंस्था मान्दैमा पच्छगामी नहुने विचार प्रस्तुत गरे ।
अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र अनुसरण गर्दा पच्छगामी हुने हो भने, प्रगतिशील भन्ने साथीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, के त्यसो भए बेलायत, जापान, नर्वे, स्वीडेन र अष्ट्रेलियाहरु पच्छगामी हुन् त ?’
संवैधानिक राजसंस्था र सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्र प्रति राप्रपा (संयुक्त) कटीवद्ध रहेको लोहनीले प्रष्ट गरे । आफ्ना मान्यता स्थापित गर्न सडक आन्दोलन गर्ने समेत जानकारी गराउदै कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिए ।
सत्तारुढ नेकपा बहुमतबाट मात्तिएर भ्यागुता जस्तो फुलेको, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने लुते भएर दायित्वबाट विमुख भएको बताए । यस अवस्थामा जनताले भरपर्दो वैकल्पिक शक्तिको आशा गरेको र त्यो शक्ति राप्रपा (संयुक्त) हुने दावी लोहनीले गरे ।